Iwe uri chigadziri chakananga uye mutengesi kunze kweChina?
Ehe, isu tiripo. Isu tiri vemuno OEM & ODM vagadziri, vane yedu fekitori neInternational Trade department.
Fekitori yako iripi?
Fekita yedu inowana muYixing guta, Jiangsu Province, China. Zvinotora angangoita ma2hours nekumhanyisa chitima kubva kuShanghai Airport kuguta redu. Unogamuchirwa neushamwari kushanyira fekitori yedu chero nguva.
Ndinotenga sei zvinhu zvako?
Ndokumbira titumire kubvunza kwako (tsananguro, mifananidzo, kunyorera) kuburikidza neAlibaba, E-mail, Wechat us. Zvakare iwe unogona kutipa kufona zvakananga nezve zvaunoda, tichakupindura iwe ASAP.
Inguva yekutungamira yakareba sei?
Zvinotora kumativi makumi maviri nemashanu kusvika makumi matatu mazuva mushure mekunge samples yasimbiswa uye dhipatimendi ratorwa. Kana iwe uchida midziyo nekukurumidza, tapota tiudze, uye isu tinogona kuedza zvatinogona kuti tikupe pekutanga.
Ndingaite sei kuwana sampuri kubva kwauri?
Kana isu tine stock yemamodeli iwe aunoda, tinokwanisa kukutumira iwo sampuli yemahara zvakananga. Asi kana iwe uchida KUSVIRA, mutengo we sampling uchabhadharwa. Uye kune nzira mbiri, iyo yekutakura inoda kubhadharwa newe. Masampula anogona kutumirwa kuburikidza neFedex, UPS, TNT, DHL, ect.
Nezvigadzirwa zvekugadzira zvakawanda, iwe unofanirwa kubhadhara makumi matatu muzana pasitemi isati yatanga kugadzirwa uye 70% zviyero pakutakura zvinhu. Nzira yakajairika ndeye T / T pamberi. Kuyera kuburikidza neL / C, DP pakuona inogamuchirwawo.
Ndinogona kutarisa mhando yezvinhu ndisati ndaendesa?
Ehe, kungave iwe kana shamwari dzako dzekambani, kana wechitatu unogamuchirwa kufekitari yedu kuti itarise isati yasvika
Zvinhu zvinounzwa sei kwandiri?
Nehuwandu hushoma, isu tinopa zano kuendesa neakadhi, seFedex, UPS, DHL, ect.
Kune hukuru hwakawanda, isu tinopa zano kwekutakura nengarava. Tinogona kutumira zvinhu kune yako yekugoverwa Kutumira Forwarder (FOB mutengo). Kana kana iwe usina imwe, tinogona kukwidza mutengo weCIF.